ဈေးကှကျထဲ ပစ်စညျးပွတျနသေညျအထိ ရောငျးအား ကောငျးနတေဲ့ အိမျသုံး အောကျဆီမီတာ တိုငျးတာရာတှငျ သတိထားစရာ အခကျြမြား – Askstyle
ဈေးကှကျထဲ ပစ်စညျးပွတျနသေညျအထိ ရောငျးအား ကောငျးနတေဲ့ အိမျသုံး အောကျဆီမီတာ တိုငျးတာရာတှငျ သတိထားစရာ အခကျြမြား
ကိုဗဈ တတိယလှိုငျးကွောငျ့ ပွညျသူတှခေမြာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားနကွေရပါပွီ။ ခုဆိုရငျ အရငျကလို ကိုဗဈစငျတာတှလေညျး မရှိတဲ့အတှကျ ပွညျသူတှအေနဖွေငျ့ အခငျြးခငျြ.းကူညီဖေးမကာ ကိုဗဈ 19 ကို ကြျောဖွ..တျနကွေရပါတယျ။ကိုဗဈ ဖွဈတဲ့အခါ အောကျဆီဂငျြ မကသြှားဖို့ အရေးကွီး..တဲ့အတှကျ အိမျ.မှာကုနတေဲ့သူတှေ အ.တှကျအိမျသုံး အောကျဆီမီတာ ဟာ မရှိမဖွဈလိုအပျလိုလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအောကျဆီမီတာ သုံးတဲ့..အခါ သတိပွုရမယျ့အခကျြတှကေိုတော့ ပွညျ့သူတဈယကျေက ခုလို ဝမြှေထားပါတယျ။
*လကျခြောငျးထိပျမှာမှဲ့၊ မှေးရာပါအမှတျ..၊ အသားမာ၊ အမာရှတျရှိနရေငျ အဖွမေမှနျတတျပါ။
*အိန်ဒိယလူမြိုးတှေ ..လကျခြောငျးမှာဆေးဆိုးထားရငျ အဖွမေမှနျတတျပါ။
*အရမျးလငျးနတေဲ့နရောမှာ အဖွမေမှနျတတျပါ။ (အမှောငျခနျးမှ.ာအဖွပေိုတိကပြါတယျ) ဒါကွောငျ့ အောကျဆီမီတာ.ကိုကွညျ့ရငျ အတှငျးဘကျနောကျမှာအမညျး..ရောငျရာဘာလိုမြိုးခံထားတာတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။.
*SpO2 တိုငျးတာနတေဲ့လူနာလှုပျရှားနရေငျ အဖွမေမှနျတတျပါ။
*ကာဘှနျမိုနော့ဆိုကျအဆိပျမိနတေဲ့လူမှာ အဖွမေမှနျတတျပါ။ (မီးခိုးငှတှေ့အေမြားကွီးရှုထားတဲ့သူကို တိုငျးရငျ အဖွမေမှနျတတျပါ)
*Poor perfusion သှေးကွေ.ာမြှငျလေးမြားထဲသှေးပွနျ့နှုနျးမတူတဲ့သူမှာ အဖွမေမှနျတတျပါ။
(လကျကိုဖဈြညှဈထားရငျ အဖွမေမှနျတတျပါ။ ဥပမာ – လကျမောငျ..းမှာသှေးပေါငျခြိနျတိုငျးနရေငျ)
*ဆေးလိပျသောကျတာတအားမြားလို့ လကျထိပျမညျးနသေူမြားမှာ အဖွမေမှနျတတျပါ။
*အသားမညျးတဲ့သူတှမှောထကျ အသားဖွူတဲ့သူတှမှော အဖွပေိုတိကပြါတယျ။
*အတှငျးမကျြနှာပွငျညဈပနေလြှေငျမမှနျတတျပါ။ (လကျမှာဆီပနေတောရှိရငျ အောကျဆီမီတာအတှငျးအပျေါအောကျမကျြနှာပွငျကို အဝတျသနျ့သနျ့နှငျ့သနျ့စငျပေးပါ။)
*အောကျဆီမီတာ အမြိုးအစ.ားမကေ..ာငျးရငျ အဖွမေမှနျပါ။ ဒီအခကျြလေးကို သတိပွုပွီး ကိုယျ့ရဲ့ SPO2 levelကိုတိုငျးတာကွညျ့လို့ရပါတယျ။ သာမနျလူ.တှအေနနေဲ့ SpO2 အောကျဆီမီတာကိုသုံးစှဲရာမှာ 100 % မှ 95% သညျ ပုံမှနျ၊ 94 % မှ 91% သညျ.. အရေးပျေါအခွအေနေ၊ 90. % အောကျသညျ အလှနျအမ…ငျးအသကျအန်တရာယျကိုစို..းရိမျရသောအခွအေ..နဖွေဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းကြောင့် ပြည်သူတွေခမျာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားနေကြရပါပြီ။ ခုဆိုရင် အရင်ကလို ကိုဗစ်စင်တာတွေလည်း မရှိတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေအနေဖြင့် အချင်းချင်.းကူညီဖေးမကာ ကိုဗစ် 19 ကို ကျော်ဖြ..တ်နေကြရပါတယ်။ကိုဗစ် ဖြစ်တဲ့အခါ အောက်ဆီဂျင် မကျသွားဖို့ အရေးကြီး..တဲ့အတွက် အိမ်.မှာကုနေတဲ့သူတွေ အ.တွက်အိမ်သုံး အောက်ဆီမီတာ ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်လိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအောက်ဆီမီတာ သုံးတဲ့..အခါ သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုတော့ ပြည့်သူတစ်ယေက်က ခုလို ဝေမျှထားပါတယ်။
*လက်ချောင်းထိပ်မှာမှဲ့၊ မွေးရာပါအမှတ်..၊ အသားမာ၊ အမာရွတ်ရှိနေရင် အဖြေမမှန်တတ်ပါ။
*အိန္ဒိယလူမျိုးတွေ ..လက်ချောင်းမှာဆေးဆိုးထားရင် အဖြေမမှန်တတ်ပါ။
*အရမ်းလင်းနေတဲ့နေရာမှာ အဖြေမမှန်တတ်ပါ။ (အမှောင်ခန်းမှ.ာအဖြေပိုတိကျပါတယ်) ဒါကြောင့် အောက်ဆီမီတာ.ကိုကြည့်ရင် အတွင်းဘက်နောက်မှာအမည်း..ရောင်ရာဘာလိုမျိုးခံထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။.
*SpO2 တိုင်းတာနေတဲ့လူနာလှုပ်ရှားနေရင် အဖြေမမှန်တတ်ပါ။
*ကာဘွန်မိုနော့ဆိုက်အဆိပ်မိနေတဲ့လူမှာ အဖြေမမှန်တတ်ပါ။ (မီးခိုးငွေ့တွေအများကြီးရှုထားတဲ့သူကို တိုင်းရင် အဖြေမမှန်တတ်ပါ)
*Poor perfusion သွေးကြေ.ာမျှင်လေးများထဲသွေးပြန့်နှုန်းမတူတဲ့သူမှာ အဖြေမမှန်တတ်ပါ။
(လက်ကိုဖျစ်ညှစ်ထားရင် အဖြေမမှန်တတ်ပါ။ ဥပမာ – လက်မောင်..းမှာသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းနေရင်)
*ဆေးလိပ်သောက်တာတအားများလို့ လက်ထိပ်မည်းနေသူများမှာ အဖြေမမှန်တတ်ပါ။
*အသားမည်းတဲ့သူတွေမှာထက် အသားဖြူတဲ့သူတွေမှာ အဖြေပိုတိကျပါတယ်။
*အတွင်းမျက်နှာပြင်ညစ်ပေနေလျှင်မမှန်တတ်ပါ။ (လက်မှာဆီပေနေတာရှိရင် အောက်ဆီမီတာအတွင်းအပေါ်အောက်မျက်နှာပြင်ကို အဝတ်သန့်သန့်နှင့်သန့်စင်ပေးပါ။)
*အောက်ဆီမီတာ အမျိုးအစ.ားမကေ..ာင်းရင် အဖြေမမှန်ပါ။ ဒီအချက်လေးကို သတိပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ SPO2 levelကိုတိုင်းတာကြည့်လို့ရပါတယ်။ သာမန်လူ.တွေအနေနဲ့ SpO2 အောက်ဆီမီတာကိုသုံးစွဲရာမှာ 100 % မှ 95% သည် ပုံမှန်၊ 94 % မှ 91% သည်.. အရေးပေါ်အခြေအနေ၊ 90. % အောက်သည် အလွန်အမ…င်းအသက်အန္တရာယ်ကိုစို..းရိမ်ရသောအခြေအ..နေဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။